अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका जेठा छोरालाई कोरोना संक्रमण - Naya Sanchar
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका जेठा छोरालाई कोरोना संक्रमण
Donald Trump Jr., executive vice president of development and acquisitions for Trump Organization Inc., speaks during the Republican National Convention at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, D.C., U.S., on Monday, Aug, 24, 2020. President Trump plans to appear nightly during the four-day convention, which after today will be staged mostly from Washington because of the coronavirus pandemic. Photographer: Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg
६ मंसिर २०७७, शनिबार १८:५८
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जेठा छोरा पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। उनका व्यक्तिगत प्रवक्ताले जेठो छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको शुक्रबार पुष्टि गरेका हुन्।
‘सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएपछि उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको सिफारिस अनुसारका सबै मापदण्ड तथा नियमको पालना गरेका छन्,’ ती प्रवक्ताले भनेका छन्। सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै उनी क्वारेन्टिनमै रहेका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्प पनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कोरोना सङ्क्रमित भएका थिए। त्यसैगरी ट्रम्पपत्नी तथा प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प, सानो छोरो बोर्न, मुख्य कर्मचारी मार्क मेडोस र अरु केही सदस्यसमेत केही समय अगाडि संक्रमित भएका थिए।
अहिले ट्रम्प जुनियरकी महिला साथी किमबेर्ली गुइल्फोयलेमा पनि सङ्क्रमण भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। ट्रम्प जुनियर हालै २ सय ५० भन्दा बढी अतिथिहरु सहभागी भएको भोजमा सहभागी भएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसमै आयोजना गरिएको सो रात्रि भोजमा सहभागी कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन् ।
नेता पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न नेकपा नेताहरुकाे माग